Ny mahazavadehibe ny fananana mpikatroka Afro-feminista ao amin’ny governemantan’i Costa Rica · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2018 10:06 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Français, Ελληνικά, Italiano, Español
Epsy Campbell Barr, filoha-lefitr'i Costa Rica 2018-2022. Saripikan'i MadriCR, navoaka mifanaraka amin'ny lisansa Creative Commons (Attribution-ShareAlike 4.0 International – CC BY-SA 4.0).
Tafiditra ao anatin'ny tantaram-pirenena ho vehivavy mainty hoditra voalohany lany ho filoha lefitry ny firenena ao Costa Rica — sy manerana an'i Amerika Latina — i Epsy Campbell Barr. Taorian'ny latsa-bato, mandefa ny eritreriny amin'ny dikan'ny vehivavy tahaka an'i Epsy ao anatin'ny governemanta ny rahavaviny, Shirley Campbell Barr, tao amin'ny fifanakalozan'imailaka tamin'ny tonian'i Global Voices. Eto ambany ny endrika voahitsy sy nadika avy tamin'ny fiteny hafa an'izany imailaka izany, izay nahazoana avy alalana amin'i Shirley ny famoahana azy.
Ankehitriny efa nifarana ny hazakazaka handrombaka izay ho filoha ao Costa Rica ary efa nitsaha-ketrika ny fangotrangotrahan'ny fampahalalam-baovao, dia ilaina ihany ny mandeha any ankoatry ny lohateny sy ny mandinika hoe nahoana no hanamarika ny fiainana ara-politikan'ny firenena sy ny renim-paritra ny nifidianana an'i Epsy Campbell ho filoha lefitra.
Antom-pankalazan'ny vondrom-piarahamonina taranaka afrikana maro manerana ny kaontinanta amerikana iray manontolo ny fandresen'i Epsy. Tsy mbola voatrandraka tsara araka ny tokony ho izy nandritra ny fotoam-pifidianana ny dika sy halehiben'ny fifidianana azy ao Costa Rica, ary efa tratra aoriana ihany vao natao anton-dresaka. Na izany aza, ny fisandratany dia vokatry ny ezaka tsy mitsahatra nataony tao anaty sy tamin'ny anaran'ny vondrom-piarahamonina taranaka Afrikana, indrindra fa avy amin'ireo vehivavy.
Nitranga tao amin'ny firenena efa manana fahazarana demaokratika, iray amin'ny ela nijoroana indrindra sy marin-toerana indrindra ao Amerika Latina ny fahatongavan'i Epsy tao amin'ny sehatra ara-politika — fa tao amin'ny fotoana nahatongavan'ny kandidà iray hafa mifaninana ho filoha izay mandrahona ny handrava sy hanalamaka tanteraka ny fandrosoana ara-demaokratika niezahana tao anatin'ny taona maro izany.
Ny andininy voalohany amin'ny Lalampanorenan'ny Repoblika izay maha-filoha lefitra an'i Epsy amin'izao fotoana izao dia mankatoa an'i Costa Rica ho repoblika marofoko sy marokolontsaina, saingy fivoarana vao haingana izany (ny governemanta teo aloha no nanitsy ny lahatsoratra). Firenena nampiseho ary mbola maneho ny tenany ho “fotsy” i Costa Rica, ny be fotsy hoditra indrindra ao amin'ny faritra Amerikana Afovoany, ary sarotra ny nahazoana fankatoavana amin'ny maha-marokolontsaina sy fahasamihafana azy.
Avy amin'izany, maro ireo olana mihatra amin'ny vitsy an'isa ao Costa Rica, toy ny mifandraika amin'ny fisoloantena na ny fahitana (ny vitsy an'isa). Eny fa na dia manana politikam-pirenena iadiana amin'ny fankahalana vahiny aza, dia mbola mitoetra ho olana hatrany ny fanavakavaham-bolonkoditra amin'ny fiainana andavanandro izay mifandraika betsaka amin'ny fandaharam-panabeazana sy ny fifaneraserana an-tsekoly.
Mbola lavitra ny lalan-kodiavina, ohatra amin'izany ny lalam-pankatoavana ny fandraisana anjaran'ny vahoaka taranaka afrikana tamin'ny tantaran'i Costa Rica sy ny famolavolàna ny fanondroam-pireneny. Noheverina hamaha ireny lohahevitra ireny ny lalam-pianarana, saingy mbola tsy ampy ny fitaovam-pampianarana ho amin'izany. Ankoatra izany, ilaina ny fanohizana ny fananganana fanairana sy fanazarana ny ekipam-pampianarana. Mety ho tsara ny fikasana, saingy sarotra ny fanatrarana tanjona na antonony na lavitr'ezaka raha tsy misy ny planina mipetraka tsara sy azo andrefesana ny vokatra. Ilaina io fanazarana io satria, amin'ny lafiny maro, mbola manohy ilay fomba fijery diso izay lasa mametra ny fisian'ny fanabeazana iraisan-kolontsaina tena izy ihany ny mpampianatra.
Eo amin'ny fanavakavaham-bolonkoditra andavanandro, mbola miseho vatana hatrany ny karazam-pijery diso ireo mponina Kostarikana taranaka Afrikana sy ny faritra betsaka taranaka Afrikana, toy ny faritanin'i Limón, izay matetika ampiarahana amin'ny herisetra sy fanaovana trafikan-drongony.
Mba isian'ny fisoloantena bebe kokoa eo amin'ny feminisma sy ny fikatrohana ho amin'ny rariny ara-tsosialy
Mihevitra aho fa ny singa fototry ny asa politikan'i Epsy, raha jerena ny tsy fitokisana lalina dia lalina misy eo amin'ny vahoaka sy ireo solontenany ao amin'ny governemanta, dia noho izy mbola miraikitra tanteraka amin'ny asa maha-mpikatroka azy sy ny fiainana manokana nandalovany. Tsy isalasalàna fa ny maha-izy azy sy ny isan'ny olona amin'ny sehatrasa maro isoloany tena no hakan'ny antokony vahana.
Na izany aza, ny fahitana azy ho iray amin'ny solontena ara-politikan'ny vahoaka no manamafy ny tolona lavitr'ezaka hisian'ny taranaka Afrikana ho ao amin'ny faribolan'ny mpanapa-kevitra ambony.
Ho an'io vondrom-piarahamonina io, maneho ny fahatsiarovantena taranaka Afrikana i Epsy. Ny ahafantaran'ny mponina taranaka Afrikana azy manerana an'i Amerika dia noho ny asany ho amin'ny zon'ny mponina taranaka Afrikana ao amin'ny faritra, fa tsy noho ny fandraisany anjara amin'ny fironana politika ao Costa Rica. Miaraka amin'ireo mpitarika maro hafa, dia nandraisan'i Epsy anjara betsaka ny hevitra hananganana hetsika Amerikana Latina mainty hoditra sy ny hetsika feminista Amerikana Latina.
Amin'io hetsika voalaza farany io dia mbola misy ihany koa ny tolona anatiny — ifanandrinana ny fanosehan'ny feminista fotsy hoditra raha vao resahina ny olana mifandraika amin'ny vehivavy mainty hoditra. Voadona mafy amin'ny filàna manontany indray ny fotokeviny mba ahafahana mampiditra, na farafaharatsiny manome lanja ny fisiana endrika hafan'ny feminisma ny hetsika feminista amerikana.
Ny fanetsehana ny vehivavy mainty hoditra ao amin'ny renim-paritra no mitondra mankany amin'ny filàna mahatakatra fa tsy irailoko ny vehivavy (maro). Mifanohitra amin'izany, ny toerana ara-tantara sy ara-piarahamonin'ny vehivavy mainty hoditra no nanimba ny fanorenan'ny hetsika iray nosainina tamin'ny fanjohin-kevitra ara-panjanahantany izay manilika any ivelany izay heverina ho “hafa.”
Rehefa tsy manisa anay ireo, tsy misy izahay
Amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra maro amin'ny firenentsika, mbola voafetra tanteraka ny fisoloantena ara-politikan'ny vahoaka taranaka afrikana. Mbola ambany kokoa ny taha ara-pahasalamana sy ara-panabeazan'ny vondrom-piarahamonina taranaka Afrikana ary miatrika vato misakana lehibe ry zareo amin'ny fidirana ambaratonga azo ekena eo amin'ny lafiny fanabeazana sy fahasalamana. Avy amin'izany, mba ahafahana manao dingana hita miavaka, dia tena nilaina tokoa ny [mijery] anay ho hetsika, fa tsy vitan'ny hoe Kostarikana ihany, saingy ilay [hetsika?] iray izay miasa eo amin'ny sehatra amerikana latina sy manerantany.
Singa iray amin'ny tolona ny fijoroana vondrom-piarahamonina taranaka afrikana ao amin'ny fanisam-bahoaka. Efa mba nanam-potoana aho niasa niaraka tamin'ny vondrona nanao fanentanana hampiditra ny resaka foko ao amin'ny fanisam-bahoaka ofisialy. Tafiditra ao anatin'ny lalana hanaovana izany ny fiaraha-miasa amin'ny manampahaizana manokana hafa taranaka Afrikana any amin'ireo firenena Amerikana Latina maro. Mafy ny asa, ary tsy mbola vita — mbola misy ny firenena sasantsasany tsy mampiditra io fanontaniana io satria tsy manaiky hankatoa ny mahazavadehibe ny famantarana ny habetsany ny tompon'andraikitry ny sampan-draharaha.
Rehefa tsy manisa anay ry zareo, [dia] tsy misy izahay.
Mahafantatra izany izahay, satria mandraka androany, mbola tsy manam-peo eo amin'ny andrim-panjakana mpanapa-kevitra ny vahoaka taranaka Afrikana rehefa milaza izay mitranga ao amin'ny vondrom-piarahamoninay manokana ireny andrim-panjakana ireny. Tsy laharam-pahamehana izahay rehefa volavolaina ny politikam-panaovan-dalàna natao hifanarahana amin'ireo vahoaka ireo araka ny tokony ho izy.
Ny fisoloantenam-bahoaka avy amin'ireo vondrom-piarahamonina ireo ihany no ahafahana manatontosa ny fametrahana politikam-bahoaka tsara rindra sy hetsika [mahomby] hanaisotra tsikelikely ny tsi-fitoviana nisy nandritra ny taonjato maro.
Tamin'ity fifidianana ity izahay niady ho amin'ny fiarovana ny zo fototra izay nananganantsika ity firenena ity. Pastora kristiana evanjelika sady mpihira nanao fanentanana mifototra amin'ny fanoherana ny zon'ny vondrom-piarahamonina LGBTQI ny iray amin'ny kandidà nitarika tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana voalohany. Nampanantena ihany koa izy hanova ny Ivontoeram-Pirenena ho an'ny Vehivavy ho “Ivontoeram-Pirenena ho an'ny Fianakaviana” — tondrozotra tena mampanahy aty amin'ny firenena izay betsaka mampanaitra ny fahamaroan'ny famonoana vehivavy.
Na dia mahafantatra aza izahay fa filoha lefitry ny firenena bitika toa an'i Costa Rica i Epsy, dia mbola mihevitra hatrany aho fa zavamisy manan-danja izany. Dingana izany, ohatra, ary fanoitra. Raha novonoina amin'ny maha mainty, feminista ary maha-feo mpanivaka azy eo amin'ny politika i Marielle Franco tao Brezila, dia mpitarika nankatoavina avy ao amin'ny hetsika Amerika Latina Mainty hoditra i Epsy Campbell, izay lany ho filoha lefitr'iCosta Rica.
Misolo tena hetsika iray mitombo an-dalana i Epsy. Mahatsapa ho voasolo tena ny vahoaka taranaka Afrikana ao Colombia, Brezila, Però, Ekoadaoro, Orogoay ary ny firenen-kafa. Ary tsy hoe misolo tena azy ireo mivantana (na izany aza anie dia filoha lefitr'i Costa Rica ihany izy). Fa misy dikany ny fisoloantena. Tena zava-dehibe ny mahita vehivavy mainty hoditra avy amin'io vondrom-piarahamonina io, sady mavitrika amin'izany.
Fitaratra izany ahafahan'ny zatovolahy sy zatovovavy mainty hoditra mijery sy mamantatra ny tenany.